नरेन्द्र मोदी सिलगडी आउने : के के हुन्छ त त्यसपछि? - खबरम्यागजिन
Homeखबरनरेन्द्र मोदी सिलगडी आउने : के के हुन्छ त त्यसपछि?
नरेन्द्र मोदी सिलगडी आउने : के के हुन्छ त त्यसपछि?
December 5, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
पटक्कै छुट्टै राज्य दिन्न भन्ने तृणमूल काङ्ग्रेससित मिलेका विनय तामाङहरूलाई विश्वास छ, भाजपा र मोदी भनेको झुटको खेती गर्ने पार्टी र नेता हुन्। यद्धपि बङ्गालमा गणतन्त्र फर्काउने र बङ्गाल बँचाउने नारा साँच्चैमा इमान्दार नारा हो भने यसपल्ट भाजपा र मोदीलाई गोर्खाहरूको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी धरै छैन। यदि यो चुनाउमा भाजपाले यस्तो कुनै भरोसालाग्दो काम गरेन र आश्वासनको लोप्पा मात्र खुवाए विमल गुरुङको युग सकिने छ र विनय तामाङको युग शुरु हुनेछ।
समाचार विश्लेषण, सिलगढी,5दिसम्बर
प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी सिलगढी आउने हल्ला व्यापक छ। भाजपाको राज्य चुनाउ पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीले पनि यस्तै सङ्केत दिएका छन्। ‘गणतन्त्र बचाऔं, बङ्गाल बँचाऔं’ नारा बोकेर भाजपाले7दिसम्बरदेखि रथ यात्रा निकाल्ने छ।
‘प्रधानमन्त्री आउने हो भने 16 दिसम्बर आउन सक्छन्, तर अहिलेसम्म पक्कापक्की चाँही भइहालेको छैन,’ भाजपाका चुनाउ संयोजक मुकुल रोयले भनेका छन्, ‘सम्भवत् उनी आउनेछन्।’
नरेन्द्र मोदी एसएस अहलुवालिया दार्जीलिङ समष्टीका उम्मेरद्वार बन्दा पनि जलपाइगढी आएका थिए। उनले ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’ भनेका थिए। गोर्खाहरूको धेरै समयदेखि विलम्बित मुद्दालाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्ने पनि बताएका थिए। 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिने भन्दै 11 वटै जातको नाम पनि काडेका थिए।
2019 को चुनाउ आयो, यसबिच नरेन्द्र मोदीले आफ्ना कुनै पनि बचन पूरा गरेनन्।
यसपल्ट भाजपाको नारा छ, गणतन्त्र बचाऔं, बङ्गाल बचाऔं। निश्चित छ, यसपाली दार्जीलिङ पहाडमा हराएको गणतन्त्रलाई पनि उनले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ।
छुट्टै राज्य अहिले नै होला नहोला तर यसपल्ट 11 जातलाई जनजतिको मर्यादा दियो भने दार्जीलिङका गोर्खाहरूको निम्ति महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ।
दार्जीलिङ पहाडमा त जनजाति बहुसंख्यक बन्नेछन्। जनजाति बहुसंख्यक बनेकोले यहाँ उठिरहेको मुद्दा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड लगायत, राज्यदेखि मुनिका कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको लागि पनि बाटो फराकिलो बन्न सक्छ।
पाँचौं अनुसूची, युटी र छैटौंअनुसूचीको लागि त अझ बाटो फराकिलो बनिने नै हो। पहाडको बहुसंख्यक जनजातिलाई केन्द्र गरेर कुनै नयाँ कानून बनाउनै पनि सक्ने सम्भावना रहन्छ।
‘पहाडको दिर्घकालीन समस्याको समाधान गर्छौं’ भन्ने नरेन्द्र मोदीले यसपल्ट पनि केही गरेनन् भने फेरि कहिल्यै गर्ने छैनन्। तर 11 जात गोष्ठीले जनजातिको मर्यादा पाउनुमात्र पनि गोर्खाहरूको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धी मानिनेछ। यदि पछिल्लो वाचा यसपल्ट नरेन्द्र मोदीले पूरा गर्ने हो भने भाजपामाथि पहाडको विश्वास बनिरहनेछ।
पहाडमा गणतन्त्र छैन र ममता व्यानर्जीले स्थानीय केही मानिसहरूलाई दवाबमा राखेर, पुलिस प्रशासन लगाएर पहाडलाई जबरजस्ती शान्त देखाउने षडयन्त्र गरिरहेको हेक्का भाजपालाई राम्रै गरी थाहा छ। गणतन्त्र बचाऔं, बङ्गाल बँचाऔं नारा यसैले स्वतस्फुर्त दार्जीलिङ पहाडसित पनि जोडिने भयो।
केही अघि केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ममता व्यानर्जीसित 30 मिनट अलग्गै कुराकानी गरेका थिए। उतिखेर सुत्रले कुराकानीमा पहाडको सन्दर्भ पनि उठेको जिकिर गरेको थियो। यद्धपि, ममता व्यानर्जी पहाडबारे सिंहका सुझावसित खुशी देखिएनन्।
त्यसपछि लगत्तै सिलगढी आइपुगेकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले भनेकी थिइन्, ‘म ज्यान दिन्छु तर बङ्गाल टुक्रन दिने छैन। भाजपाले फेरि पहाडमा अशान्ति गर्ने कोसिस गर्दैछ।’ उनले सिलगडीका हिन्दीभाषी एवं व्यापारीहरूलाई यसैबारे सतर्क पनि गराएकी थिइन्।
न त पहाडमा आन्दोलन चलिरहेको थियो, न त भाजपाले नै कुनै वयान गरेको थियो। तर अचानक ममता व्यानर्जीले सिलगडीमा बिना सन्दर्भ बङ्गाल विभाजन हुन नदिने र भाजपाले पहाड अशान्त गर्न खोजेको आरोप लगाएकी थिइन्।
सूत्रले यी सबै राजनाथ सिंहसितको बैठकको परिणाम बताएको थियो।
वास्तवमा भाजपाले पहाडको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विस्तारै परिस्थिति निर्माण गरिरहेको कुरा ममताले चाल पाइसकेकी छन्। भाजपाले आन्तरिक चलखेल ममतालाई राम्रै गरी थाहा छ। ममतालाई विमल गुरुङ कसको संरक्षणमा, किन र कहाँ बसेको छ, त्यो पनि थाहा छ। यद्धपि, केही सिमाहरूको कारण ममता व्यानर्जी त्यसको विरोधमा बोल्न पनि सकिरहेका छैनन्। विमल पन्थी मात्थिलोस्तरका नेताहरूमा पुलिसी दवाब बनाइराख्न पनि सकेका छैनन्। यद्धपि, सानासाना नेता र समर्थकहरूलाई पक्राउ गरेर समाजमा भय सिर्जना गर्न भने सक्षम बनिरहेकै छन्।
भर्खरै विमल गुरुङ समुहले केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल उरावँसित भेटेर 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिने कि नदिनेबारे बुझेको थियो। उरावँले त्यसबारे काम भइसकेको कागजपत्र नै मिडियालाई देखाएका थिए।
ती नै जनजाति मन्त्री उरावँ पनि रथयात्रामा आइरहेका छन्। सिलगढीमा नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्ने जनसभामा उरावँको उपस्थिति निश्चित छ। उरावँले 18 दिसम्बरको दिन घोषपुकुरको जनसभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। 16 दिसम्बरमा सिलगढीमा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि सम्बोधन गर्ने पक्का छ, तर भाजपा चाहान्छ, त्यस दिन नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गरुन्।
किन भने मोदीद्वारा पहाडलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गरिएमा धेरै ठाउँ राजनैतिक परिवेश नै परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ। पहाडलाई त यसै पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै हो। अहिलेसम्म पहाड भाजपासित रिसाएकै नै आश्वासन मात्र दिएको तर काम नगरेकोले हो।
यससपल्ट मोदीको आश्वासन गोटीले पहाडमा काम गर्नेवाला छैन।
पहाडको राजनैतिक परिस्थिति फरक बनिसकेको छ। यसपल्ट भाजपाले आश्वासन होइन काम गर्नु पऱ्यो। र भाजपासित त्यो कामको विकल्प 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनु र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको लागि एउटा संसदीय कमिटी बनाउनु मात्र छ।
यदि मोदी र उरावँले 11 जातिलाई जनजातिको मर्यादा पनि दिएनन्, संसदीय कमिटी पनि बनाएनन् र आश्वासन मात्रै दिएमा पहाडमा ममता व्यानर्जी र विनय तामाङको नै वर्चस्व बन्नेछ। यता यही लोकसभा चुनाउ अघि भाजपाले खेल्ने गोटीमा नै विमल गुरुङको भविष्य पनि लुकेको छ।
पटक्कै छुट्टै राज्य दिन्न भन्ने तृणमूल काङ्ग्रेससित मिलेका विनय तामाङहरूलाई विश्वास छ, भाजपा र मोदी भनेको झुटको खेती गर्ने पार्टी र नेता हुन्। यद्धपि बङ्गालमा गणतन्त्र फर्काउने र बङ्गाल बँचाउने नारा साँच्चैमा इमान्दार नारा हो भने यसपल्ट भाजपा र मोदीलाई गोर्खाहरूको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी धरै छैन।
यदि यो चुनाउमा भाजपाले यस्तो कुनै भरोसालाग्दो काम गरेन र आश्वासनको लोप्पा मात्र खुवाए विमल गुरुङको युग सकिने छ र विनय तामाङको युग शुरु हुनेछ।
अरुण सिग्चीले गर्न मानेनन् हस्ताक्षर : मिरिक कलेजका कर्मचारीहरू उत्रिए विरोधमा : भने- सिग्चीबाट हस्ताक्षर गर्ने अधिकार हटाइयोस्
के हो त इगो?